Gobolka Nizhny Novgorod - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda Gobolka Nizhny Novgorod
Calaamadda: Gobolka Nizhny Novgorod
Beeritaanka baradhada iyo beeritaanka khudaarta ayaa ka bilaabmay gobolka Nizhny Novgorod
Beeralayda Nizhny Novgorod ayaa bilaabay beerista baradhada iyo beerista khudaarta. Tani waxaa u sheegay Wasiirka Beeraha iyo Khayraadka Cuntada ee Gobolka Nizhny Novgorod ...
Gobolka Nizhny Novgorod ayaa xiraya seddexda sare ee ururinta baradhada ee Ruushka
Goynta baradhada ayaa lagu dhameeyay gobolka Nizhny Novgorod. 14,3 kun hektar ayaa loo qoondeeyay dalaggan gobolka - 7% ka badan, ...
Horumarinta waaxda beeraleyda ee gobolka Nizhny Novgorod ayaa aad loogu qaddariyay heer federaal
Dzhambulat Khatuov, Wasiir ku -xigeenka koowaad ee Beeraha ee Xiriirka Ruushka, ayaa booqasho shaqo ku tagay Gobolka Nizhny Novgorod. Wuxuu la kulmay Nizhny Novgorod soo saarayaasha khudaarta, ...
Gobolka Nizhny Novgorod, waxaa lagu dhawaaqay xukun degdeg ah sababtuna tahay luminta dalagga
Tan iyo Sebtember 23, gobolka Nizhny Novgorod waxaa lagu soo rogay nidaam degdeg ah sababtuna tahay luminta dalagga. Barasaabka Gleb Nikitin ayaa saxiixay wareegto u dhiganta, ...
Khad loogu talagalay barafowga qoto dheer ee khudaarta iyo miraha ayaa laga hirgaliyay gobolka Nizhny Novgorod
Khad cusub oo loogu talagalay qaboojinta qoto dheer ee khudaarta iyo berry ayaa laga hirgeliyay degmada Krasnobakovsky iyadoo lagu saleynayo dhismaha beeraha ee Vetluga. Mashruuca maalgashiga ayaa ahaa...
Gobolka Nizhny Novgorod wuxuu qorsheynayaa inuu helo 400 kun oo tan oo baradho ah sanadka 2021
Hawlaha horumarinta dhismaha agro-warshadaha ee gobolka Nizhny Novgorod ee sanadka 2021 ayaa looga dooday kulan ay yeesheen guddiga Wasaaradda Beeraha iyo Kheyraadka Cuntada ...
Sanadihii la soo dhaafay, LLC Aksentis wuxuu si joogto ah uga mid ahaa hoggaamiyeyaasha soo saarista baradhada abuurka ee Xiriirka Ruushka. Shirkadda ayaa ka shaqeysa ...